160L 1-3 Layers ထိပ် Drum Blow Molding Machine ကိုဖွင့်ပါ။
220L 1-3 အလွှာ နှစ်ထပ် ဓာတုဒရမ် လေမှုတ် ပုံသွင်းစက်
200L-10000L ရေစည် Blow Molding စက်
1000L 1-3 အလွှာ IBC Tank Blow Molding စက်
2022 Brand New LH-BM3000L4Layers Water Tank Blow Molding Machine ၏ ပို့ဆောင်မှု
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်- Luhong အလိုအလျောက် အခေါင်းပေါက် လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် လေမှုတ်ပုံသွင်းခြင်း extrusion molding လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံပါသည်။ထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များ- ဟိုက်ဒရောလစ်ဆာဗိုထိန်းချုပ်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။အသုံးများသောပစ္စည်းများ- hard tooth surface reducer + imported inverters များ...
2022 Brand New LH-BM1000L3အလွှာ IBC Tank လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်
admin မှ 22-04-24 ရက်နေ့တွင်
LH-BM1000L3Layers IBC Tank Blow Molding Machine သည် IBC tanks ၏ 1-3 layers ကိုမှုတ်ထုတ်နိုင်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော ဓာတုစည်များ၊ IBC တိုင်ကီများ၊ IBC ပလပ်စတစ်စည်စသည်ဖြင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသောထုတ်ကုန်ထိရောက်မှု၊ အမြန်မှုတ်ပုံသွင်းမှု၊ တည်ငြိမ်သောစနစ် ...
IBC Tank Blow Molding Machine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
admin မှ 22-04-18 ရက်နေ့တွင်
IBC tank များကို အတွင်းစည်းနှင့် အပြင်ဘောင်အဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။IBC တိုင်ကီမှုတ်ပုံသွင်းစက်ကို IBC ကန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သာ အဓိကအသုံးပြုပါသည်။ IBC သိုလှောင်ကန်များသည် ဓာတုအရည်များအတွက် ဘုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။အရည်အများအပြားသည် မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်လုပ်သော IBC tank ၏ အရည်အသွေးသည် အလွန်မြင့်မားသည်။ဘယ်လိုလဲ...
2022 Brand New 1000L IBC Tank Blow Molding Machine သည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။
IBC Tank Blow Molding Machine ၏ ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် IBC အခေါင်းပေါက် လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဝိသေသများကား အဘယ်နည်း။IBC တန်စည်၏ ထုထည်သည် 450L-3000L ခန့်ဖြစ်သည်။၎င်းကို စက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။အများအားဖြင့်တော့...
2022 Brand New Road Barrier Blow Molding Machine သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။
Luhong လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်သည် အခေါင်းပေါက် လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်များ၏ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ပေးခြင်းများတွင် အထူးပြုပါသည်။လမ်းအတားအဆီးမှ လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်များကို အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဆူဒန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ပြည်နယ် ၁၈ ခုသို့ တင်ပို့ထားသည်။လမ်းအတားအဆီးပုံစံတွေက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ 2022 ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့် အပ်ဒိတ်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Luhong Plastics Blow Molding Machine သည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်နည်းပညာအသစ်၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမုဒ်မှ လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်၏ ရောင်းချမှုအပြီးဝန်ဆောင်မှုစနစ်အထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်း တက်ကြွပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်နေပါသည်။1. ကုပ်နေသည်...
ပျော်ရွှင်စရာ ကျားနှစ်ဖြစ်ပါစေ၊ ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်၊ 2022 မှာ ရုံးပြန်တက်ပါပြီ။
admin မှ 22-02-07 ရက်နေ့တွင်
2022 ခုနှစ်၏ နှစ်သစ်ကူး ခေါင်းလောင်းသံ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအားလုံးကို စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားလိုပါသည်။ပြီးခဲ့သောနှစ် 2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် တိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်...
LH-BM220L 1-3 အလွှာ ဓာတုဒရမ် လေမှုတ် ပုံသွင်းစက်
1. 220L Double Ring Barrel/Chemical Drum Blow Molding Machine ၏ နိယာမသည် ပုံမှန်အားဖြင့် LH-BM220L Double Ring Barrel/Chemical Drum Blow Molding Machine ၏ နိယာမသည် အခြားသော အခေါင်းပေါက် ပလပ်စတစ်မှုတ်ထုတ်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် တူညီပါသည်။PE/HDPE ပစ္စည်းများသည် extruder barrel သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့သည်...
2022 ခုနှစ်တွင် Brand New Luhong Blow Molding Machine မိတ်ဆက်ခြင်း။
Luhong Blow Molding Machines များသည် ဒေါင်လိုက်စည်များ၊ အလျားလိုက်စည်များ၊ နှစ်ကွင်းစည်များ၊ ဓာတုစည်များ၊ IBC တန်စည်များ၊ ရေလမ်းအတားအဆီးများ၊ မိလ္လာကန်များ၊ ဗန်းများ၊ ကယက်များ၊ ဆီစည်များ၊ ဆေးကုတင်များ၊ ဆိုလာလိုင်း စသည်တို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးသည်..။
LH-BM1214 PE/HDPE Pallet ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပလပ်စတစ် မှုတ်ပုံသွင်းစက်
ခေတ်မီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် အခြေခံကွန်တိန်နာများထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ပလတ်စတစ်အလွှာများသည် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏ ပေါင်းစပ်မှုတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကို မျက်နှာသာပေးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ထုတ်ယူမှုကိရိယာများ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ pallets များအတွက် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားများလာကာ လူတိုင်းက ပိုမိုထိရောက်သောစက်ပစ္စည်းများကို လိုက်ရှာနေကြသည်။အယ်ဒီတာ...
သင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် မှန်ကန်သော လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်ကို ရွေးချယ်နည်း။
လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်ကို ဝယ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို သတိထားသင့်လဲ။လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်များဝယ်ယူရာတွင် ပြဿနာအားလုံးကို နားလည်သဘောပေါက်ပါမည်။လေမှုတ်ပုံသွင်းစက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်- လေမှုတ်ပုံသွင်းစက် အရည်အသွေး၊ အမှုအခြေအနေ...
Blow Molding Machine Process နိဒါန်း
လေမှုတ်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် စက်မှုရုပ်ရှင်များ၊ ပုလင်းများ၊ သတိပေးချက်တိုင်များ၊ ပလပ်စတစ်စည်များ၊ လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ၊ မိလ္လာကန်များ၊ ကယက်များ၊ နှစ်ထပ်စည်စည်များ၊ ပလပ်စတစ်များ၊ ဆိုလာကန်များ၊ မိုဘိုင်းအိမ်သာများ၊ ရေပေါ်များ၊ အိပ်ယာခေါင်းနဲ့ IBC စည်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း...
Add- Shibu စက်မှုဥယျာဉ်၊ Changyi မြို့၊ Shandong ပြည်နယ်၊ China-261315
၀၀၈၆ ၁၃၉ ၆၄၇၂ ၃၆၆၇